XRP (XRP) In US dollar (USD) Heerka Sarrifka
macluumaadka wakhtiga dhabta ah ee lacagta digital.
Updated 19/01/2020 09:00
XRP si Dollar sarrifka maanta. Qalabka lacagta lacagta lagu beddelanayo - qiimaha maanta ee sicirka lacagta ee adduunka oo dhan.
XRP si Dollar sarrifka maanta
1 XRP (XRP) uyeelaysaan 0.24 US dollar (USD)
1 US dollar (USD) uyeelaysaan 4.09 XRP (XRP)
Qiimaha sarrifka dhabta ah XRP to US dollar maanta. Qiimaha lacagta waxaa laga soo qaatay ilo lagu kalsoon yahay. Dhammaan hawlgallada sarrifka lacagaha ee suuqyada crypto waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu saleynayo sarkaalkan XRP ilaa US dollar sicirka sarrifka maanta. Goobta tixraaca ee loo yaqaan 'lacagta digital site' waa bilaash oo maalin kasta ayaa la cusbooneysiiyaa.
Heerka sarrifka XRP gudaha US dollar sida laga soo xigtay suuqa sarrifka lacagta suuqyada 19/01/2020.
1 XRP ayaa maanta la mid ah 0.24 US dollar suuqa crypto. 1 XRP wuxuu kacay 0.006872 US dollar maanta suuqa ugu horreeya Yurub ee suuq Yurub. XRP sicirka sarrifka ayaa sare u kacaya US dollar marka loo eego Yurub. Marka loo eego 1 XRP hadda waxaad u baahan tahay inaad ku bixiso 0.24 US dollar sicirka suuqa crypto Yurub.
XRP In US dollar Heerka Sarrifka maanta 19 January 2020
Qiimayaasha XRP to US dollar maalmihii la soo dhaafay waxaa lagu muujiyey jadwalka bogga. Wixii iibsiga faa'iido leh ee lacagta digital - isbarbar dhig firfircoonaanta heerka sarrifka maalmihii dhawaa. Waa muhiim in la arko ma aha oo kaliya sicirka sarrifka ee maanta, laakiin sidoo kale sicirrada shalay iyo maalintii ka hor. Fahmitaanka dhaqdhaqaaqa wuxuu ku siin doonaa fursad aad ku fahamto heerka sarrifka XRP to US dollar berrito.
19/01/2020 0.244374 0.006872 ↑
18/01/2020 0.237502 0.006919 ↑
17/01/2020 0.230583 0.00451 ↑
16/01/2020 0.226073 -0.009666 ↓
15/01/2020 0.235739 0.018951 ↑
Beddelaan XRP In US dollar
XRP (XRP) In US dollar (USD) qiimaha sicirka
XRP (XRP) In US dollar (USD) shaxda qiimaha taariikhda
2.44 US dollar qiimaha 10 XRP sicirka sarrifka hadda. 12.22 US dollar maanta kharashkiisu waa 50 XRP) ee sicirka sarrifka. Si aad u iibsato 100 XRP halkii US dollar maanta waxaad u baahan tahay inaad bixiso 24.44 USD. Qiimaha 250 XRP sicirka sarrifka waa 61.09 US dollar. 1 XRP wuxuu la mid yahay 0.24 US dollar marka loo eego sicirka sarrifka ee suuqa crypto maanta. 1 XRP wuxuu kacay 0.006872 US dollar maanta sida ku xusan qiimaha sarrifka ee suuqa ugu weyn ee wadanka.
2.44 USD 12.22 USD 24.44 USD 61.09 USD 122.19 USD 244.37 USD 610.94 USD 1 221.87 USD
Iibsashada 1 US dollar for XRP maanta waxaad u baahan tahay inaad bixiso 4.09 XRP. Marka loo eego 5 USD waxaad ubaahantahay inaad bixiso 20.46 XRP . Qiimaha 10 US dollar sicirka sarrifka waa 40.92 XRP. Qiimaha 25 US dollar sicirka sarrifka waa 102.30 XRP. XRP sicirka sarrifka ayaa sare u kacaya US dollar. 1 XRP hadda waa kharash 0.24 US dollar - heerka sarrifka ee suuqa crypto.
4.09 XRP 20.46 XRP 40.92 XRP 102.30 XRP 204.60 XRP 409.21 XRP 1 023.02 XRP 2 046.04 XRP